Katongo oo ku guuleystay abaalmarinta BBC - BBC Somali - Cayaaraha
Katongo oo ku guuleystay abaalmarinta BBC
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 December, 2012, 17:01 GMT 20:01 SGA
Christopher Katongo waa cayaartoygii ugu horreeyay ee koonfurta qaaradda ee ku guuleysta abaalmarintan
Christopher Katongo ayaa ku guuleystay abaalmarinta Cayaaryahanka Afrika ee BBC ee sanadka 2012.
Cayaaryahankan 30 jir ka ah ee reer Zambia, waxa uu ka guuleystay Demba Ba, Didier Drogba, Younes Belhanda iyo Yaya Toure isaga oo noqday cayaartooygii ugu horreeyay ee ku guuleysta abaalmarinta ee ka yimaada koonfurta qaaradda Afrika.
Liiska waxaa sameeyay khubaro dhinaca kubadda cagta oo ka kala yimid dal walba oo Afrika ah, kuwaasi oo xulashadooda ku saleeyay xirfadda, awoodda farsamo, cayaar wanaagga iyo shaqo kooxeedka cayaartooyga.
Tiradii ugu badneyd ayaa u codeysay online iyo fariimaha telefoonka, in ka badan 40% oo codad ah ayuu helay Katongo, oo u cayaaraha naadiga kubadda cagta ee Shiinaha ee Henan Construction.
Iyadoo cayaartooyda tartameysa uu sanad wanaagsan u ahaa, ayaa haddana Katongo waxqabadkiisi iyo guulihiisi ay taageerayaasha kubadda ee Afrika u arkeen inuu ahaa midka ugu wanaagsan.
Katongo waxaa sidoo kale uu askari ka yahay dalkiisa hooyo, waxaana uu ahaa ninka horkacay kooxda markii ay ku guuleysatay Koobkii ugu horreeyay ee Qaramada Afrika bishii Febraayo.
Waxa uu gacan ka geystay in dalkiisa ku guuleysto koobka Qaramada Afrika
Waxa uu dhaliyay saddex gool intii ay u socdeen cayaarta kama dambeysta oo uu ka dhaliyay Equatorial Guinea iyo Gabon, kadibna waxa uu dhaliyay rigoore cayaartii guusha koobka ay kaga qaadeen Ivory Coast oo 8-7 uga badiyeen.
Waxay u ahayd xilli qiiro leh Zabia, oo ay heshay masiibadii shilka diyaaradeed 19 sano ka hor, markii dayaarad ay saarnaayeen inta badan kooxda qaranka ay ku burburtay meel 500m ka baxsan Libreville, oo ay ku dhinteen 25 rakaab ah iyo shan shaqaale.
Toddobo bilood kadib markii uu si guul ah, Katongo uu ku hoggaamiyay Zambia ayaa mar kale waxa uu noqday nin mucjiso u keenay, markan is reebreebka koobka Qaramada Afrika ayuu gool uga dhaliyay cayaartii ay la lahaayeen Uganda.
Waxaa kale oo Katongo uu dalkiisa kor uga qaaday wajigii adkaa ee ololaha is reebreebka koobka adduunka 2014.
Haddii Katongo uu ku sii wado qaabka uu ku caawiyay dalkiisa iyo weliba midda shaqsiyadeed ee loo aqoonsan yahay waxaa suurtagal ah in Zambia beerka ugu sarreeya uu ka gaarsiin doono cayaaraha Brazil ee dhacaya 18 bilood gudahood.